AMD's Ryzen 7 5800X3D Inotanga Kubvumbi 20, Kuwedzera 6 Nyowani Yakaderera & Yepakati-Range Ryzen Chips
Kubva pakatangwa AMD's Zen 3-powered Ryzen 5000 desktop processors mukupera kwa2020, iyo kambani yekutengesa desktop chip zvinopihwa zvave zvakamira. Iine AMD yakatarisana neinorema kudiwa kwezvigadzirwa pamatanho akawanda - kubva kuCPU kuenda kumaGPU kunyaradza maAPU - uye zvese panguva isati yamboitika chip crunch, kambani yakadzora mukuwedzera iyo desktop inopihwa. Pane kudaro, AMD yakatarisana neyakaganhurirwa yayo TSMC 7nm wafer migove pakuyedza kuenderana nezvinodiwa zvezvimwe zvakakosha (uye zvepamusoro margin) zvigadzirwa, senge server CPUs, laptop machipisi, uye yepamusoro-yekupedzisira desktop CPUs.
Nekudaro, sezvo iyo chip crunch yakambodzikira-zvishoma, AMD yave kutendeudzira kutarisa kwavo kunzvimbo yedesktop, kuti vapedzisire vatarise kuburitsa yavo desktop processor chigadzirwa lineups. Takaona maonero edu ekutanga svondo rapfuura nechiziviso chezvanga zvakamirirwa kwenguva refu Threadripper Pro 5000 akatevedzana yezviteshi. Uye ikozvino kwevhiki rino kambani iri kuzivisa mazuva ekutangwa kweanoverengeka matsva eRyzen desktop processors.
Inotungamira kubhadharisa ndeye AMD itsva Ryzen 7 5800X3D. Yakamboziviswa kuCES 2022 ine "spring" yekutangisa nguva, iyo 5800X3D ndiyo inonyanya kunakidza desktop chip dhizaini kubuda mu AMD mumakore mashoma apfuura, nekuda kwekubatanidzwa kwayo kwekuwedzera L3 cache muchimiro che AMD's kufa-yakaturikidzana. V-Cache. AMD iri kunyatso kukanda iyi 8 musimboti processor seyekupedzisira chip yekutamba - pahwaro hwekuti kuita kwemitambo kunobatsira kunyanya kubva kune yakawedzera L3 cache - uye ichange ichiiburitsa muna Kubvumbi 20 nemadhora mazana mana nemakumi mana nemapfumbamwe.
Zvichakadaro, AMD iri kushandisawo nguva ino kupedzisira kuzadza hafu yepasi yeingava yechinyakare chip chigadzirwa stack, iyo kusvika zvino yakamira neiyo ine simba hex-core Ryzen 5 5600X pamadhora mazana maviri nemakumi matatu. Pamwe chete AMD iri kuvhura matanhatu matsva processor SKUs kuzadza iyo diki- $ 230 chikamu, kusanganisira maviri e6-musimboti Zen 300 CPUs uye 6-musimboti Zen 3 CPU. Zvakanyanya kusajairika, zvimwe zvikamu zvitatu zvitsva Zen 2 machipisi, ari kushandiswa kutenderedza ma processor avo akachipa. Imwe yeiyi SKUs inosanganisira APU uye ichatengeswa pasi pe AMD's Ryzen 4000 chigadzirwa mutsara, nekutengesa kunotarisirwa kutanga muna Kubvumbi 4.
Chekupedzisira, mukufamba sekusingatarisirwe zvakaenzana sekutangisa maZen 2 SKU matsva muna 2022, AMD iri kupedzisira yaregedza kugonesa rutsigiro rweRyzen 5000 processors pa AMD's ekare mazana matatu akateedzana chipsets. Kunyangwe iyo kambani yakaramba kwenguva refu kutsigira itsva Zen 300 machipisi pane aya ekare chipsets, rinenge gore nehafu gare gare AMD iri kupedzisira yachinja tune yavo, uye ichange ichiburitsa (uye ichitsigira) kodhi inodiwa kune vanogadzira mamaboard kuti vawedzere rutsigiro. machipisi muBIOS itsva. Kuti izvozvo zviitike, Ryzen 3 rutsigiro runofanira kutanga kuoneka mubeta BIOSes muna Kubvumbi naMay.
Ryzen 7 5800X3D: "Iyo Inokurumidza Kutamba Mutambo CPU"
Musoro wezviziviso zvemazuva ano kubva ku AMD ndiko kuziviswa kwezuva rekuburitswa kweiyo kambani hunyanzvi Ryzen 7 5800X3D. Iyi chip uye mataurirwo ayo akazara akaziviswa kumashure sechikamu che AMD's CES 2022 mharidzo, asi panguva iyo AMD yakanga ichiri kukwidza kugadzirwa kwechirimo. Ikozvino chitubu chave kuda kubuda, uye zuva rekutanga reRyzen 7 5800X3D rakavharwa kusvika Kubvumbi 20.
Painotangisa, iyo 5800X3D inongove yechipiri chip kubva ku AMD kutanga neV-Cache, ichitevera Milan-X mhuri, iyo pakupedzisira cheki ichiri kutarisirwa mwedzi uno usati wapera. Iyo 5800X3D, mukuenzanisa neMilan yakakura, idiki-diki-chikero kutumirwa kwe AMD's cache stacking tekinoroji. Asi hapana zvishoma ndiyo yekutanga desktop processor kugamuchira tekinoroji, uye ichave yedu yekutanga kuravira pane izvo kuwedzera iyo imwe yekuwedzera L3 cache inogona kuitira AMD's Zen 3 CPU architecture.
AMD Ryzen 5000 Series processors yeDesktop (> $200)
Zen 3 Microarchitecture (Isiri-Pro, 65W+)
pabutiro iGPU PCIe TDP SEP
Sekukurumidza kuzorodza, iyo cache-inorema chip ichava neZen 3 CPU core chip ine ese 8 cores akagoneswa, uye imwe 64MB yeV-Cache yakarongedzerwa pamusoro kweiyo yakazara 96MB yeL3 cache. AMD iri kubata izvi seyakakura cache vhezheni yezvino 8-musimboti 5800X, zvisinei wachi inomhanya ichave yakati siyanei. Iyo 5800X3D ichange iine base wachi yekumhanya ye3.4GHz uye turbo wachi yekumhanyisa ye4.5GHz, zvese zvakaderedzwa zvishoma kubva kune yakajairwa 5800X. Sekureva kwe AMD, izvi zvinodaro nekuti vakasarudza kubata chip's TDP padanho rakafanana re105W seyekutanga, uye nekudaro wachi dzaifanira kuridzwa pasi kuti dzigone kushandisa simba rekuwedzera cache.
Chero zvazvingaitika, AMD yafunga kuteera musika wemitambo nebeefy 8-core CPU. Sezvinotsanangurwa nekambani kumashure kuCES 2022 uye yakadzokororwa muchiziviso chanhasi, AMD yakaona kuti chip iri 15% nekukurumidza pakutamba pane yavo Ryzen 9 5900X. Sezvakataurwa naDr. Ian Cutress panguva iyoyo: “Iyo cache yekuwedzera inoitirwa kubatsira nekutaurirana nemakadhi emifananidzo akasiyana, achipa mamwe maitiro pamusoro peR7 5800X yenguva dzose. Basa rekuita basa harina kukanganiswa, uye kune avo vashandisi maRyzen CPUs anotarisirwa kuve nani. "
Uye, pamwe zvakanyanya kutsoropodza, isu tave nemutengo weiyo chip: $449. Mutengo unouya sezvo AMD nguva pfupi yadarika yakamisa izvo zvinoita senge-iyo-bhodhi mutengo wakatemwa kune yavo Ryzen 5000 desktop machipisi, ayo pakati pezvimwe zvinhu akaona yepakutanga 5800X ichidonha kubva pamadhora mazana mana kusvika kumadhora mazana matatu nemakumi mashanu. Pamitengo yazvino, izvi zvinoreva kuti 400X350D uye yakawedzera 5800MB yeL3 cache inotakura $64 premium, inova kuwedzera kwakasimba kwekuita kwakavhurwa necache hombe. Asi inogona kuratidza kupfuura kukosha kwayo kana yakaringana kunyatsovharisa chip munzvimbo yepamusoro yemitambo yebasa.
Mukuita, ini ndinotarisira iyo 5800X3D kurarama (kana kufa) zvichienderana nemitengo. AMD's 12-core Ryzen 5900X iri zvakare madhora mazana mana nemakumi mana nemapfumbamwe, saka vatengi vari kuda kuparadzana nemari iyoyo vachange vachisarudza pakati pemamwe mana eCPU cores kana imwechete Zen 449 chiplet ine 4MB mamwe L3 cache. Izvi zvinopa iyo 64X3D nzvimbo yakamanikana kuti ibudirire pairi, sezvo mabasa mazhinji anogona kuisa 5800 cores pakushandisa zvakanaka anogona kuita zvirinani ne 3. Mitambo ndiyo imwe chete inosarudzika kumutemo uyu: kwete chete mitambo yemultiplatform yakagadzirirwa kurwisa 8 core. MaCPU ekutanga, asi nekuda kwekudikanwa ivo vanowanzove neyakakura-serial master tambo iyo inotadzisa kuedza kuparadzira basa pamusoro pehuwandu hukuru hwemacores.
Chero zvazvingava, vatambi vanowana mukana wekuisa maoko avo pane chip mukati mechinguva chinopfuura mwedzi, painozotengeswa muna Kubvumbi 20. Kufanana nemamwe AMD machipisi eX, iyi haiuye neinotonhorera, saka uchafanirwa kuunza yako yekuvhurwa uku.
Kuwedzera Pasi: 6 Nyowani Ryzen 5000 CPUs & Ryzen 4000 APUs
Zvakare nekutangisa chip chitsva chepamusoro-chepamusoro, AMD iri kushandisawo zviitiko mumavhiki mashoma anotevera kuzadza iyo yakaderera hafu yechip chigadzirwa stack. Kubva pakatangwa Ryzen 5000 yakatevedzana kudzoka muna Mbudzi wa2020, iyo yakachipa chip AMD yakapa ndeye 6-musimboti Ryzen 5 5600X, iyo kunyangwe ichitevera kuderedzwa kwemitengo kuchiri $229. Nekuda kwe AMD kumanikidzwa nekuenderera mberi chip crunch, kambani yanga ichisarudza kuisa migove yayo muzvigadzirwa zvepamusoro-soro, izvo zvine pundutso kupfuura mhando yezvigadzirwa zvakaderera zvinoumba musika wemadhora mazana maviri.
Izvi zvakasiya Intel iine hutongi hwemahara hwemusika-kusvika-yepakati-renji kwemwedzi yakati wandei. Nepo vakomana vebhuruu vasina kuvharirwa zvachose kubva kune chip crunch chero, nekuve neyavo machira Intel haisi kukwikwidza nevamwe vatengesi pakugoverwa kwewafer. Nekuda kweizvozvo, Intel yanga iri yega vender shipping machipi akakodzera iyo sub- $ 200 musika wechikamu chiri nani chegore rapfuura.
Asi hutongi hweIntel husina kupikiswa hwemusika uyu hwakagadzirirwa kusvika kumagumo kutanga kwaKubvumbi, apo AMD inotangisa akati wandei maRyzen chip SKUs kuti apedze mutsara wavo we- $ 300. Nemachipisi matsva ari mumutengo kubva pamadhora makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe uye achipa pakati pe99 uye 299 cores, AMD iri kunyatso kurongedza kuti ienderane. Intel izere 12th Gen Core (Alder Lake) chigadzirwa stack.
Kusiyana ne5800X3D, hapana zvinyowani zvekutaura nezvazvo pano - aya angori maSKU matsva akavakirwa pane aripo chip dhizaini - saka machipisi matsva akati twasa. Hapana zvishoma, pane zvimwe zvinhu zvinonakidza zviri kuitika pano zvine chekuita nekuvaka uye kufa AMD yakasarudza kushandisa - kunyanya kuunzwa kweZen 2 SKU itsva muna 2022.
AMD Ryzen 4000/5000 Series processors yeDesktop (<$300)
Achch iGPU PCIe TDP SEP
Tichatanga neiyo itsva Ryzen 5000 series chips, iyo Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600, uye Ryzen 5 5500. Kufanana nedzimwe 5000 dzakatevedzana, izvi zvose zvinoenderana neZen 3 architecture, uye zvichibva pane zvakatemwa zvinotaridzika. kuve uchishandisa imwe chete Zen 3 CPU core chiplet. Iine 6 cores imwe neimwe, iyo $199 5600 uye $159 5500 yakagadzirirwa kuunza iyo mazana mashanu akatevedzana mhuri pasi kusvika ~$5000 mutengo poindi.
Iine 3 6C processors mumutsara wayo, AMD haisi kuzove ichisiyanisa zvikamu izvi zvakanyanya pahwaro hwewachi. Iyo 5600 yakavharwa mazana emazana MHz yakaderera pane iripo 5600X, uye iyo 5500 yakati yakadzikira zvakadaro. Pane kudaro, mutsauko unotsanangura we5500, iri iyo yakachipa chip, ndeyekuti iri kupawo imwe L3 cache uye PCIe 4 kushanda. Iyi chip ichave iine 16MB yeL3 cache (hafu yakawandisa semazuva ese), uye maPCIe ayo malink anozoganhurwa kuPCIe 3.0 kumhanya. Saka iyo yekuwedzera cache uye PCIe 4.0 mashandiro icharamba iri premium ficha (yemhando) ye5600 zvichikwira (uye nekudaro, handingashamiswe kana 5500 iri Cezanne Chip).
Zvichakadaro iyo Ryzen 7 5700X inhengo isinganzwisisike yeboka, sezvo isingareve kuwedzera iyo Ryzen renji zvakanyanya sekureva kuzadza mamwe maburi. Iyo 8 core chip ichave nemutengo pamadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe, ichipa AMD yavo yekutanga sub- $ 299 300C chip munguva, uye ichipa chimwe chinhu chakasimba kudzivirira Intel's 8+6 core i4-5K panguva ino yemutengo. Ini ndinotarisira kuti izvi zvicharatidza kuyedza chip kune vatengi vari kutsvaga kuchengetedza mari shoma, sezvo ichipa yakafanana 12600MB yeL32 cache se3X, uye iyo yepamusoro turbo wachi ingori 5800MHz pazasi AMD inonyanya kuzivikanwa 100C chip.
Chekupedzisira, kuitira kuunza AMD yazvino chitoro chigadzirwa stack pazasi peiyo $159 mucherechedzo, AMD iri kunyoresazve imwe Zen 2 hardware. Kunyanya, zvinenge Makore maviri mushure mekunge AMD yatanga kuburitsa yavo Renior-based Zen 2 APUs yeOEM desktop musika, tave pakupedzisira kuwana 7nm Renoir mumusika wekutengesa desktop, kunyangwe paine maSKU mazhinji matsva. Uye, mukuchengetedza kuenderana nehardware uye branding, aya machipisi matsva achatengeswa sechikamu chemhuri yeRyzen 4000 - nekudaro zvichimaka kekutanga mhuri yeRyzen 4000 yave kuwanikwa pakutengesa.
Kutanga kubva, isu tine Ryzen 5 4600G, yechokwadi APU iyo kusvika zvino yave kungowanikwa kumaOEMs. Ichi chikamu chinopa 6 Zen 2 CPU cores yakasanganiswa ne AMD's RX Vega 7 (7 CU) mifananidzo. Iyo yepamusoro turbo wachi ye4.2GHz yakasanganiswa neZen 2's yepasi IPC zvinoreva kuti pachave nekagero rinoonekwa mukushanda kweCPU pakati peiyi neRyzen 5 5500. Zvakadaro, kana uchida Ryzen chip yakachipa ine magirafu akabatanidzwa, ipapo 4600G ichave. yako imwe uye yega sarudzo ye AMD APU ine iGPU.
Pasi pe4600G tine SKU mbiri itsva kubva ku AMD, iyo $ 129 Ryzen 5 4500, uye $ 99 Ryzen 3 4100. Uye kunyange zvazvo zvose izvi zvikamu zvingaita sezviri kubva paRenoir zvakare, AMD yakavhara iGPUs pazvikamu izvi. Saka ivo vanonyanya APUs-sans-graphics, kekutanga nguva yatakaona AMD ichiita izvi neiyo Ryzen 4000 yakatevedzana. Kubva pamaonero anoshanda, zvinoita sekunge AMD iri kushandisa maSKU aya kupedzisira atengesa Renoir anofa ane zvikanganiso zvachose, AMD iine makore maviri apfuura kuunganidza iwo machipisi.
Iyo Ryzen 5 4500 chikamu che6C chine base wachi yekumhanyisa ye3.6GHz uye turbo wachi ye4.1GHz, ese ari 100MHz pazasi pe4600G. Zvikasadaro, iyo chip inowana yakafanana 8MB yeL3 cache. Pakupedzisira, iyo Ryzen 3 4100 inopa chete 4 Zen 2 cores, iyo yakavharwa pa 3.8GHz base uye 4.0GHz turbo. Iine imwe yeRenoir's maviri CCXes akaremara, inopa chete 4MB yeL3 cache. Ose maviri machipisi aya achange achikwira achipesana neIntel's Core i3 mutsara, ne4100 yakatarisana neGPU-shoma i3-12100F yakaenzana.
Yese itsva Ryzen 5 uye Ryzen 3 SKUs ichapetwa ne AMD's Wraith Stealth inotonhorera, uye icharova mumigwagwa muna Kubvumbi 4th. Zvichakadaro iyo Ryzen 7 5700X ichasvetuka inotonhorera, asi icharova mumigwagwa pazuva rimwe chete nemamwe machipisi.
Official Ryzen 5000 Tsigiro ye AMD 300 Series Chipsets
Chiziviso chekupedzisira chine chekuita nechigadzirwa che AMD chemangwanani chinotarisa pamabhodhi eamai - uye kunyanya, ekare mamabhodhi.
Mushure merinenge gore nehafu kubva pakatangwa AMD yekutanga Ryzen 5000 (Zen 3) CPUs, AMD iri kupedzisira yaunza tsigiro yepamutemo yeRyzen CPUs kune AMD yekare Zen/Zen+ 300 dzakatevedzana chipsets. Sezvo AMD yakashandisa socket imwechete AM4 mukati mese kumhanyisa mhuri yeRyzen yemachipisi kusvika parizvino, Ryzen 5000 machipi agara achikwanisa kukwana uye kushanda nemagetsi mumabhodhi ekare. Nekudaro, iwo mabhodhi ekare akashaya inodiwa yeBIOS rutsigiro kubhowa machipisi.
Zvese izvi zvaita kuwedzera rutsigiro kune nyowani Ryzen machipi chikumbiro chakareba kubva kune varipo AMD vashandisi, kuvapa nzira yekusimudzira yemabhodhi avo aripo. Asi zvakare imwe AMD yave ishoma pane kushuvira kuburitsa, sezvo mazana matatu akateedzana chipset ari akawanda zvizvarwa zvakakura kupfuura iyo Ryzen 300 chips. Kunyangwe tsigiro ye AMD yeRyzen 5000 CPUs pane mazana matatu akateedzana chipset yanga iri piecemeal zvakanyanya.
Asi zvese izvi zviri kupedzisira zvachinja, kutanga mwedzi unouya. AMD yave kuunza dhigirii rerutsigiro rwepamutemo kumhuri yeRyzen 5000 pa AMD 300 akatevedzana chipset motherboards, kutanga neAGESA 1.2.0.7. Kune mazana matatu akatevedzana chipset mamabhodhi, iyo vhezheni yeAMD's BIOS module ichawedzera izvo kambani iri kudaidza kuti "beta" rutsigiro rwemhuri yeRyzen 300. Kune iwo mabhodhi anogona kusangana neRyzen 5000's simba rezvinodiwa, zvinogoneka kubhutsu machipisi pamwe chete neiyo AGESA itsva.
Izvi zvinoda zvakadaro kuti vagadziri vebhodhi reamai vaburitse maBIOS matsva kune avo mazana matatu akateedzana mamabhodhi, ayo panguva ino ane zvizvarwa zviviri zvekare (uye anga atove mukupera kwa300). Saka chero zvigadziriso zvakadaro zvingangoita kunge zvidimbu - akakurumbira mamabhobho kubva kumusoro-tier vagadziri vane mukana wekuwana inodiwa BIOS yekuvandudza pane isingazivikanwe mamabhodhi. Saka nepo AMD iri kuita kuti AGESA inodiwa iwanikwe kune vese vatengesi, hapana ari kutarisira Ryzen 2019 rutsigiro kuti ive wepasirese kuyambuka mazana matatu akatevedzana mamabhodhi.
Pakazere, iyi izano rakafanana nemabatiro akaitwa AMD Ryzen 3000 (Zen 2) CPU rutsigiro rwemazana matatu chipset akatevedzana mamabhodhi. Kwakange kusati kwambove nerutsigiro rwepasirese ipapo, asi pakave nerutsigiro rwebeta kune vatengesi vebhodhi reamai vakasarudza kuiwedzera.
Maererano ne AMD, vashandisi vanofanirwa kutarisira kuona maBIOS ane Ryzen 5000 rutsigiro munguva yaApril-kusvika-May. Sezvo zvigadziriso zveBIOS zviri dura revagadziri vebhodhi reamai ivo pachavo, iyo nguva yakatarwa ichave iri kuboka rekupedzisira uye pavanosarudza kuburitsa yakagadziridzwa BIOSes.
AMD ine boka reRyzen 5000 Mobile CPUs. Ndeipi yakanakira iwe?
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve AMD's Ryzen 5000 processors
AMD Ryzen 7 5800U / 5700U uye 4800U laptops - tsananguro, mabhenji uye yakazara runyorwa